musha nyika dzakabatana Halima Aden Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Halima Aden Zvekuchecheche Biography Nyaya.
Yedu Halima Aden Biography Chokwadi inokupa iwe ruzivo paYake Yevacheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Rudo Hupenyu (Mukomana / Murume), Net Kukosha, Lifestyle uye Hupenyu Hwega.
Ichi chidimbu chinonakidza chinokukurudzira nehunhu hwake. Kubva panguva diki semupoteri kusvika pakuve iye yekutanga hijab-yakapfeka supermodel munyika.
Zvirokwazvo, iye akasungwa akasungirwa pamazano mazhinji. Zvisinei, pane zvimwe zvakakosha zvakakomberedza Halima Aden's Biography izvo vanhu vazhinji vasingazivi.
Tichifunga izvi, tinoenda pakadzika kuti tikutore iwe chokwadi kuti iwe ugone kunakidzwa nazvo zvinofadza pakubata kwako.
Halima Aden Yemwana Nhau:
Kutanga, hiramani-akapfeka supermodel akazvarwa musi wa19 Gunyana munaSeptember 1997 mumusasa wakasarudzika weUnited Nations - Kakuma Refugee Camp, Northwestern Kenya.
Halima Aden akazvarwa kuvabereki vake- amai vanozivikanwa saMai Aden uye kuna baba vake vavakange varasikirwa navo.
Waizviziva here?… Baba vake vakafa nekuda kwemamiriro ezvinhu evabereki vavo vachitiza Hondo yevaSomalia pakati pemakore '90 vachitsvaga kupotera kuKenya.
Panyaya yemhuri yaHalima Aden, supermodel-yakazvarwa vapoteri ndeyemadzitateguru eSomalia. Nhasi, ane mugari wemuUS ane chiziviso cheMinnesotan.
Kutanga, Halima Aden akakurira munharaunda dzakasiyana. Hudiki hwake hwaive huzere nendangariro dzinonakidza, kusava nechokwadi uye zviitiko.
Chokwadi ndechokuti akatanga makore ake ouduku ari mumusasa wevapoteri weKakuma pakati pevamwe vana vomuAfrica.
Kunyangwe ichive pekugara kwevapoteri kwaakashandisa makore ake ekutanga manomwe ekugadzira, modhi inoramba ichirondedzera kuti dzimba dzavo dzaiwanzoparadzwa sei. Mhuri yaHalima Aden sevamwe vazhinji, vakauya pamwechete kuti vavakezve.
Mumusasa, vana vaitamba kusvikira zuva rasviba. Zvakare achiri ikoko, dzimwe nguva airwara kubva marariya uye kushomeka kwechikafu. Zvakadaro, ichiri kunzwa seyakavakirwa.
Halima Aden Mhuri Yemhuri:
Sanganisa matambudziko ehupenyu - Halima Aden haana kudzorwa nehurombo hwemhuri yake.
Anowanzo rondedzera hupenyu hwake hwepakutanga pakati penharaunda inonakidza yetsika dzakasiyana: apo zvitendero zvakasiyana zvinopemberera pamwechete.
Kunyangwe, vabereki vaHalima Aden- kunyanya baba vake vaive vasipo asi amai vake vakapfuura nepakati pekusagadzikana kuti vachengetedze.
Muna 2004, mhuri yaHalima Aden yakatamira kuUnited States uye yaigara muSt Louis, Missouri nzvimbo ine hurombo. Kugara mune imba diki kwazvo uye uchirarama pazvitampu zvekudya kubva munharaunda.
Nekudaro, nekuda kwekushomeka kwechirongwa chinosanganisira chevasingataure Chirungu, aisakwanisa kusangana zvakanaka kuchikoro. Kutamisirwa kwavo kuSt Cloud, Minnesota, kwakamupa dzidzo iri nani. Nzvimbo amai vake vachiri kurarama.
Halima Aden Dzidzo Yekumashure:
Pachikoro chesekondari chaApollo muSt. Cloud Minnesota, muenzaniso weramangwana wakasarudzwa semambokadzi wekumba.
Kumuita iye musikana wekutanga wechiMuslim kumbobata zita iri muchikoro nhoroondo yemakore makumi matanhatu nemashanu. Semunhu achangotanga kuSt Cloud State University, akapinda muMiss Minnesota USA Runako Peji.
Yakanga iri 2016 - vane 19years vekare vakasvika kune semi-fainari vakapfeka burkini muchikwata chekushambira. Haana kuhwina korona.
Kunyangwe, kushora kwake kwakasarudzika kwakaonekwa nemaAmerican. Ikozvino kuvimbiswa nemukurumbira wemagazini mupepeti: Careine Roitfeld. Mavhiki akati gare gare akanzwira tsitsi CR Mufambo Bhuku.
Halima Aden Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Mushure meMinnesota Pageant, ramangwana rakapfeka hijab rakagamuchirwa kufona kubva IMG modhi. Uye akasainwa.
Serimwe remasangano makuru ematarenda epasirese, iyo agency inoshanda neane mukurumbira supermodels: Barbara Palvin, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Bella Hadid etc. Izvi zvakafumura Halima kune vateereri vakawandisa vane kusvika kwakanyanya munyika yenyika yefashoni.
Yeezy Fashion show naKanye West yaive yake yekutanga fashoni gig. Pazuva rakatarwa, iyo hijab-yakapfeka modhi yaisagona kupfekedza chipfeko chakakandwa kwaari sezvo chainyanya kuburitsa.
Musikana akanaka uyu akazoshevedzwazve kubva kuhotera yake pavakamuwana aimupfekedza.
Halima Aden Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Kuve IMG modhi, cum yake yekutanga photoshoot pamwe neanonyanya kutsvaga mufotori: Careine Roitfeld naMarion Sorrenti.
Pakazosvika 2017, Halima akange ave nedhipatimendi rake seyekutanga-kupfeka hijab modhi pane anozivikanwa ekutiza mafashoni. Ipapo yakatambanuka paYeezy Fashion, Max mara, Albert Ferretti, nevamwe.
Nekudaro, nekukurumidza, basa rake rakaramba richikwira. Musikana mudiki-weguta achizviita munzvimbo dzakasimba kwazvo dzemafashoni: Italy, New York, France, Europe, kuenda kuLondon.
Iyo yakasungwa breaker inotumira pfungwa yekubatanidzwa. Nekudaro tichishanda nevanoziva muBeauty cum Mafashoni epasi saRihanna, Tommy Hilfiger, Nike nezvimwe.
Halima Aden's Biography - Kubudirira Nhau:
Pakati pegore ra2017, aive achipenya pamagazini anonyanya kuzivikanwa emafashoni munyika. Akashongedza zvivharo zveAllure, British Vogue, Vogue Arabia, Grazia UK nezvimwe kuMiss USA 2017, hunhu hwaHalima Aden hwakange hwamuisa pachikuva semumwe wevatongi.
Senge panguva yekunyora nyaya yeupenyu yaHalima Aden, UNICEF yakamuita mumwe wevamiriri vayo (mu2018). Inofadza iye uyo akatenda kuti vakaita basa rinotyisa panguva yehudiki hwake pamusasa.
Zvakare, musikana akanaka yakadzika-yakagara kumira kweanofungidzira ikozvino yaonekwa pabutiro reSports Illustrated (2019).
Nekudaro, kumuita iye wekutanga hijab-akapfeka supermodel paSI Swimsuit Edition Garment-ed in burkini and hijab. Zvimwe zviri paHalima Aden Biography, sezvatinotaura, ikozvino nhoroondo.
Halima Aden's -Mukomana, murume, Vana?
Saizvozvowo, isu tanga tichinetsekawo kuti ndiani? Kana kuti ari kutevedzera dzimwe tsika nemitemo? Kana zvasvika pakudanana, iyo supermodel haidi kupfuura zvinowoneka zveshamwari.
Uye kutaurwa kupfupi kwemhuri yaanotaridza pachena. Sezviri pachena, mhuri yake uye hupenyu hwerudo hwakavanzika zvakanyanya kunyangwe iri mukuwonekera.
Kusvika panguva ino, supermodel haisati yawanikwa iine mukomana. Iye angave angave akanaka pakuichengeta yakavharirwa kana zvechokwadi zviri pachena kuti haana kuroora.
Zvakangodaro, kana paine munhu chaiye akabata moyo waHalima, saka zvigunwe kusvika kwaari: waenda kure zvakadaro veruzhinji vasingazive. Asi kwenguva yakareba sei?
Kana vari vana, Miss Aden haana kuroora kana zvakare haana vana. Izvo zvakare hazviratidzike sekuti anga aine chero pachivande.
Halima Aden Hupenyu Hwemhuri:
Kana iwe uchiziva iyo modhi, saka mubvunzo ndewokuti; iwe unoziva zvakadii nezvevadiwa vake? Kunyangwe zvisiri zvakawanda zvinozivikanwa nezvevabereki vaHalima Aden.
Zvakangodaro, ngatitorei muongororwo wavo kutanga kubva kunhoroondo yake uye kuti zvinomusimudzira sei kushinga kupokana nematambudziko ese. Apa toenda.
Nezve Halima Aden Baba:
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve baba vaHalima Aden. Zviri zvechokwadi zvinotarisirwa sezvo iye zvakare asina kumuziva iye. Chokwadi, baba vake vanobva kuSomalia.
Ipo vabereki vake vaHalima Aden vakatiza maSomalia muna 1994 kubva kuhondo yenyika, dambudziko rakaunza nyonganiso, kupatsanurwa uye nemamiriro asingafanoonekwi.
Baba vaHalima vakarasika. Mushure mekupedza makore manomwe mumusasa wevapoteri weKakuma vasina kumbosangana kana kumuona, amai vake vakafunga kuti afa.
Waizviziva?… Gare gare kuUS, mhuri yaHalima yakanzwa kubva kwaari. Ivo baba vake vakaedza kusvika, asi vakafa mushure asati avaona zvakare.
Nezve Halima Aden Amai:
Sezviri pachena, amai ve supermodel vakapfeka hijab vanobva kuSomalia. Halima akabatana zvakanyanya naamai vake sezvakangoita kune avo vane vabereki vakatamburira kusimudzira vana vavo.
Amai vake igamba rake guru. Musikana akanaka anoona amai vake sesimba rakatenderedza zvinhu zvake uye kubudirira.
Mai Aden vakapona muhondo yevagari vemuSomalia nekutizira kune imwe nyika nekuchengetedza mhuri yavo. Waizviziva here?… Akafamba netsoka kwemazuva gumi nemaviri.
Matambudziko aya akaita kuti afire murume wake Halima afirwa nababa. MuUS, akaita shuwa kuti awana nharaunda yavaigona kunzwa vari pamba, senge yavaive nayo kuKenya.
Ndiye kurudziro iri seri kwebasa raHalima kuvanhu uye akasimbirira kuti ashandire UNICEF, uyo akazvipira uye akariritira vanhu vakadzingwa mukamba yeKakuma.
Zvisineyi, Mai Aden vakashingirira mukuona kuti mwanasikana wavo adzidza nekuvandudza pachirungu. Supermodel inorondedzera amai vake vachimubvunza achiri mudiki, mukudzivirira Halima akashandisa mimwe mitsara kubva murwiyo "Dilemma" naNelly naKelly kuratidza kudzidza kwake.
Hudiki Mudiki Mukoma:
Kubva pakutaurwa nguva dzose, iyo Hijab modhi inotibvumidza isu kuziva kuti iye ane hama. Icho hama diki. Asi ndiani uye aripi iye anogara ari pasi pekuputirwa.
Nekudaro hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvake. Kunze kwekunge achirondedzera yavo yakagovaniswa nhoroondo yehupenyu hwepakutanga; kutamira kuAmerica uye kugadzirisa patsva kubva kune imwe nharaunda kuenda kune imwe.
Halima Aden's Relative:
Kunyanya, kana zvasvika kune yeropa uye zvisungo, supermodel zvisina kutaurwa inotaura nezvavo. Halima anogara achitaura uye kugovera mafoto evamwe vehama nehama neshamwari.
Saizvozvowo, akataura pachena kuti hama dzake dzaive sei dzisingazive nezvefashoni yenyika sechishandiso uye chikuva chine hunhu hwakasimba. Pakutanga, zvaive zvisiri nyore kwavari kubvuma basa rake semuenzaniso.
Ivo vaitenda kuti runako makwikwi yakanga isiri chikamu chetsika yavo. Kunyange zvakadaro, Basa remhuri yaHalima Aden nguva yekuyamwisa nekudzidzisa. Izvi zvinofungidzirwa senge zvakakodzera, nekuti vakadzi havana kuitirwa kuti vagare vari veruzhinji.
Halima Aden Hupenyu hweMunhu:
Kubva pakutanga kweiyi bio, isu tave kuburitsa zvisinga zivikanwe chokwadi cheiyo yekutanga hijab-yakapfeka supermodel; inosangana nekuzvarwa kwake, mhuri, basa.
Iye zvino ngatitorei iwe kuburikidza nekushanya kwemamwe mafekitori ayo anoita kuti iyo yakasungwa breaker ive inoshamisa kutanga mune akawanda mafonti. Zvakare nekuzvimiririra kwake kure nemeso eruzhinji rwevanhu.
Zvakajairika neVirgoan, Halima inoratidza chiratidzo cheZodiac zvakakwana. Ari kunetsekana nezve hutano, chikafu, uye hutsanana anofanirwa kushanda muzvipatara mwedzi minomwe kuita modelling.
Pasina kutaura, iye ari ongororo, ane ruzivo-anotarisisa, anozvininipisa uye anoshanda nesimba. Iye anoshandisa mukurumbira wake kushandisa chaiko, kutsigira zvikonzero zvevanhu; kukurudzira vasikana vadiki uye chizvarwa nenzira inotaura pasina zvipingaidzo.
Uyezve kucherechedza, hunhu hwe supermodel hwakajeka, pasi-kune-pasi uye hunodakadza. Nei takataura kudaro? Iye anopenya kuburikidza nehunhu hwake neyakareruka uye poise nekusatambisa kudzika kwekutanga kwehupenyu hwake.
Urombo hwaakaberekerwa; kuve musikana wetaundi kubva kuMinnesota kana kukwikwidza wepeji peji yemari; kana kusaziva akawanda mafashoni mifananidzo asati apinda muindastiri inopeta kukosha kwake. Paanenge asiri kubasa, anopfeka zvakapfeka zvipfeko zveSomalia kana zveIslam zvakapfupikiswa.
Izvo Halima Inoita Kunze Kwekuenzanisa:
Mune zvese sekukwiridzira kwaanogona kuita modhi nechikoro, kutaura kuruzhinji uye kuita zvechisimba. KuLondon, anobatsira kusimudzira Pandora Charms for Change Initiative, kudyidzana kwevakadzi nemari inowanikwa kuvana.
Halima anotenda kuti zvisinei nemuteveri-wechikepe - isu tese tinogona kukanganisa - uye tinofanirwa kushandisa mapuratifomu edhijitari kusimudzira zvakanaka.
Halima Aden Mararamiro:
Iyo yekuSomalia-American supermodel ine chivimbo, yakashinga, inotaurisa, yakazvimirira - uye hunhu hwake hwayo hunotumira izwi rine simba kumatunhu ese, chinamato uye nzanga-yemagariro kukamukana.
Halima anowanzo famba achienda kune dzakasiyana nyika asi kazhinji pane chirongwa kwete kuzorora. Iye anoita kunge asiri kutera mukumanikidzwa kwevanhu, zvinotarisirwa uye nemaitiro; nekudaro anga akatsoropodza, ane mwero uye anoshanda nemararamiro ake.
Halima Aden Net Kukosha:
Panguva yekunyora biography yake, mambure aHalima Aden anosvika madhora miriyoni (1 stats). Hupfumi hwake kazhinji hunobva kumabasa ake ekuenzanisira uye magigi emafashoni.
Kuti asimbise, iye anodambura anotsemuka kazhinji anogara akanyarara pamararamiro ake uye haaratidze zvinhu zvepamberi. Imba yake, anogara muSt. Paul Minnesota uye achiri kuisa kero kana ari makuru modelling gigs.
Halima Aden Chokwadi:
Kudhirowa keteni paHalima Aden's biography, heano matauriro akakodzera kucherechedzwa nezve yepasi rose hijab-yakapfeka supermodel.
CHOKWADI #1 – Mutauro:
Muenzaniso wewakazvarwa wevapoteri aisanzwisisa kana kutaura Chirungu kusvika mushure mekunge mhuri yake yatamira kuSt Cloud Minnesota. Angaite makore masere ekutanga iye anotanga kudzidza Chirungu uye nhasi ari nyanzvi yekutaura ari chikoro chesekondari kunze kuita vezera rake uye ikozvino kuenda kukoreji.
CHEMA # 2 - Multi-Lingual:
Sezvo akaberekerwa munharaunda dzakasiyana, Halima anotaura chiSwahili, Somali uye iye zvino Chirungu zvakanaka.
Semwana, aive nesimba uye achishamwaridzana munharaunda yake. Saka achiturikira mitauro yevakuru kuti agone kubvumidzwa mumapoka akasiyana kuti abatane nemapoka emazera akasiyana.
CHOKWADI # 3 - TED Taura:
Muna 2018, Aden akava wekutanga mupoteri kupa rukova rwizi TED Talk pamusasa wevapoteri. Iyo yakaratidza nguva yakakosha kune supermodel sezvo yaive nguva yekutanga kudzokera kunzvimbo yake yekuzvarwa kubva paakasiya aine makore 7. Pavaifamba mukirasi naTen Vogue.ķ
CHEMA # 4 - Mikana:
Zvakatemerwa, yekumodheru yekuteedzera kuchengetedza kwaive netsaona. Mune mamwe mazwi, pakanga pasina gadziriro kana zvirongwa zvekuve modhi.
Aive asina ruzivo rwezvekumodela zvakare. Kupinda kwake mumakwikwi eMinnesotan USA kwaive kumupa mari yechikoro kana akazova pakati pevakuru gumi nevashanu.
Zvadaro, yakazova nzira yebasa renguva yakazara, nyeredzi uye hupfumi.
Chokwadi # 5 - icho Chibvumirano:
Yekusimbisa, kupfeka hijab chikamu chisinga gadzirisike muchibvumirano che supermodel. Pane kumhanya-mhanya, kavha yemagazini kana mafashoni ekuratidzira anovimbisa kuti asambomanikidzwa mukuibvisa.
Kutaura chokwadi, nhoroondo yakaita glamor musikana ane akaparadzanisa tende kumashure. Izvi zvinomubvumira kupfeka uye kugadzirira mafashoni emitambo.
Chokwadi # 6 - Iyo Yakawanda Kutanga:
Chekutanga chave pseudonym padivi pezita raHalima Aden, akavhura musuwo kune mamwe mamodheru-akapfeka hijab muindasitiri yemafashoni.
Pamusoro pazvose, iye ari wekutanga kupfeka hijab modhi paBritish Vogue munhoroondo yemakore zana nemaviri emagazini.
Saizvozvo, chimiro chake se yekutanga hijab-yakapfeka muenzaniso paMutambo Illustrated yaive yakakura kusvika parinoshandura kupfeka kwe bikini kuenda burkini kwevasikana vanosarudza kuenda vasina kuvhima, kushamba pamhenderekedzo nezvimwe.
Iyo fashoni indasitiri ikozvino inogara vasikana vakapfeka zvidzitiro, hijab kana turbans sezvakaratidzwa muna 2018 kuwa kwemafashoni mwedzi uine Ikram Abdi Omar, Amina Adan, Kadija Daiwara etc.
Chokwadi # 7 - Kugadzirwa Kwekukurudzira:
Pakutanga, Halima aifanirwa kuenda pamwe nesvutu yake uye zvifukidzo zvekutiza uye kuratidza. Kwete futi.
Iye zvino anokurudzira makuru magwaro ekugadzira akadai seNike kugadzira hijabs kekutanga munhoroondo yayo; Tommy Hilfiger anogadzira misoro-masikavha kunyanya kwaari.
Zvakare, iwo stereotypes ari kujekesa sezvo iye asingaendi kumitambo achitora ake ake maskafu. Mavara mazhinji zvino anozvigadzira.
Iye ari, panguva yekunyora nyaya yehupenyu hwake, achibatsirana na Modanisa; nokudaro kugadzira Unganidzo makumi matatu neshanu nezvifukidzo zvinouya zvakasiyana, kupfeka zviri nyore kuvasikana / vakadzi vanofarira.
Chokwadi # 8 - Trivia:
Pasina kupokana, Halima Aden kutanga kwekutyora mabhendi neiye yake hijab kwaive kubva 2016. Kuenderana nekurambidzwa kwekurambidzwa kwevanhu vanopfeka hijab muUSA. Nekudaro, vazhinji veMuslim vakakanganiswa neiyo stereotype; maitiro ekutumira kubva ku9 / 11 US kurwisa kwemagandanga.
MuSomalia-America anogovera nhoroondo ine zita rakakura muindasitiri yemafashoni. A South-Sudan Australian supermodel: Adut Akech (uyo akanga atamira kuAustralia pazera re5).
Vose vakazvarwa uye vakakurira mumusasa wevapoteri mumwechete kunyange zvazvo Miss Akech akaberekwa makore 2 mushure meHalima.
Sir William Golding muongorori we "Lord of Nhunzi" anozvarwa pazuva rimwe chete neHalima. Saizvozvo saiwo muvhi weTV Jimmy Fallon, News Anchor Soledad O'Brien, Singer Tisha Yearwood, Comedian Cheri Oteri nevamwe vazhinji vane mukurumbira manhamba.
Zita reNick semwana Elmoo
Nickname iripo Mambo Limaa
Zuva rekuzvarwa 19th September 1997
Nzvimbo yekuzvarirwa Kakuma Refugee Camp, Kenya
Baba Mr Aden
Amai Mai Aden
Vanun'una 1 hama
zvinhu Kutaura, Activism, Endeavors yeVanhu
Nationality Somali - America
Networth Inenge $ 1m
Agency IMG Models (New York, Milan, Paris, London)
Akagara Minnesota, USA
ukama Parizvino single
Chikoro chepamusoro Apollo High Chikoro, St. Cloud, Minnesota
yunivhesiti Cloud State University, Minnesota
Mitauro (s) inotaurwa Swahili, Somali, Chirungu
Yakave iri nzira inofadza yekufamba ichizarura chokwadi chakatenderedza biography yeHalima Aden. Isu tinovimba izvi zvinokurudzira mumwe munhu. Haisi chete izvo zvirimo zvakatsvakwa uye zvakavimbika. Isu tinotarisirawo kukurudzira vamwe, kusvika pakutsvaga nekutsanangura chikamu chega.
Nese nzira, idzi nyaya dzehudiki uye nhoroondo dzinemamwe huwandu hweruzivo rwehupfumi rwakakodzera kutarisisa nezvayo. Nekudaro, iwe unogona kusvika kwatiri, kana iwe ukawana chimwe chinhu, chero chisinga gare zvakanaka. Isu takashama kuvhurika kutaurirana.